भारतमा कोरोनाको ‘डबल म्युटेन्ट’ प्रजाती भेटियो « Himal Post | Online News Revolution
भारतमा कोरोनाको ‘डबल म्युटेन्ट’ प्रजाती भेटियो
प्रकाशित मिति : २०७७, १२ चैत्र ०७:४८
एजेन्सी- भारतमा कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रजाति फेला परेको छ । बीबीसीका अनुसार भारतमा ‘डबल म्युटेन्ट’ भेरियन्ट फेला परेको हो ।
भारतमा संक्रमितबाट संकलन गरिएका नमूनामा नयाँ प्रकारको ‘डबल म्युटेन्ट’ भेरियन्ट फेला परेको बताइएको छ । यो नयाँ भेरियन्टमा दुईवटा म्युटेसन भएका भेरियन्ट एकै ठाउँमा आएका छन् ।
भारतका १९ राज्यमा संकलन गरिएका १० हजार ७८७ नमूनामा ७७१ जनामा ७३६ जनामा बेलायत, ३४ जनामा दक्षिण अफ्रिका र एक जनामा ब्राजिलको भेरियन्ट पनि फेला परेको छ ।
स्वास्थ्य अधिकारीहरुले नयाँ​ भेरियन्ट थप संक्रामक बनेको वा यसमाथि खोपले कति असर गर्छ भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । अधिकारीहरुले यही भेरियन्टकै कारणले मात्र भारतमा संक्रमितको सङ्ख्या नबढेको बताएका छन् ।
बुधबार भारतमा एकै दिन ४७ हजार २६२ जना संक्रमित फेला परेका थिए भने २७५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यो संख्या एक वर्ष यता कै उच्च हो ।
सरकारका अनुसार गत वर्षको डिसेम्बरको तुलनामा पश्चिम महाराष्ट्रमा संकलन गरिएका नमूनामा ई४८४क्यू र एल४५२आर म्युटेसनको सङ्ख्या बढी भएको पाइएको छ । यस्ता म्युटेसनले प्रायः मानिसको प्रतिराधात्मक क्षमतालाई छल्ने र संक्रामक बनाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
भाइरोलोजिस्ट डा. शाहीद जमिलका अनुसार भारतमा ई४८४क्यू र एल४५२आर म्युटेसन मिलेर नयाँ भेरियन्टको विकास भइरहेको छ । यस्तो डबल म्युटेसन हुनु निकै डर लाग्दो अवस्था हो । तर, आश्चर्यजनक पनि होइन । किनभने भाइरसले जहिले पनि म्युटेट भएर आफ्नो स्वरुप परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ ।
तर, के डबल म्युटेसनले भाइरसले काम गर्ने तरिकालाई परिवर्तन गर्छ ? यसले भाइरसलाई थप संक्रामक र खतरनाक बनाउँछ ? के अहिलेको खोपले यसविरुद्ध काम गर्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर भने खोज्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।